Kooxda Total Dhamaal xiligii loo baahnaa ayay heeska Speaker Phat Jaaye soo bandhigeen (+Video) – Filimside.net
Kooxda Total Dhamaal xiligii loo baahnaa ayay heeska Speaker Phat Jaaye soo bandhigeen (+Video)
Kooxda filimka Total Dhamaal waxay soo bandhigeen shidan oo hadal heynta iyo xiisaha filimkan sare u qaaday waxaana heeskan lagu magacaabaa Speaker Phat Jaaye ayadoo ay kasoo wada muuqdeen dhamaan jilaayaasha mashruucaan mada daalada dhameestiran leh wax ka jilayaan.
Heeska Speaker Phat Jaaye waxaa kasoo muuqdeen Esha Gupta, Ajay Devgn, Madhuri Dixit, Reteish Deshmukh, Anil Kapoor, Madhuri Dixit, Javed Jaffrey ayadoo si Dance wacan iyo shactiro ku dheehan u sameeyeen sidoo kalena muuqaal ahaan goob soo jiidasho leh ayaa lagu duubay.
Heeska Speaker Phat waxaa qoray Kumaar halka Harrdy Sandhu, Abuzar Akhtar, Aditi Singh Sharma iyo Jonita Gandhi ay ku luqeenayaan waana hees durba qabsatay Youtube-ka iyo baraha bulshada aadna loo hadal haayo madaama ay dhan walbo ka dheeli tiran tahay.
Filimka Total Dhamaal waxaa la daawan doonaa 22-ka bishan Febraayo waxaana Director ka ah Indra Kumar waa taxane caan ah oo labadiisa qeybood hore Dhamaal iyo Double guulo wacan gaareen markaana mashruucaan waxaa ku cusub Ajay Devgn, Anil Kapoor iyo Madhuri Dixit taasi oo ka dhigtay mid weyn oo lagu kalsoon yahay inuu Boxoffice-ka wacdaro ka dhigi doono.
Fadlan hoos ka daawo heeska Hindiya qabsatay maanta Speaker Phat Jaaye ee hadal heynta filimka Total Dhamaal siweyn sare ugu qaaday xiisaha loo qabo daawashadiisa:
Waxaa Aqrisay 449